Peter O’Toole – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Troy (2004) 2Unicode ငယ်ငယ်က သမိုင်းစာအုပ်ထဲမှာ သင်ကတည်းက ထင်ကျန်မှတ်မိခဲ့တဲ့ ဂရိတို့ရဲ့ ဂန္ဓဝင်မြောက် “ထရိုင်” မဟာစစ်ပွဲကြီး အကြောင်းရိုက်ထားတဲ့ ဇတ်ကား….. အချစ် အကြမ်း အရမ်း အလွမ်း ရသစုံလင်တဲ့ ဇတ်ကားကောင်းလေးပါ…..တော်တော်များများကြည့်ဖူးပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ မြန်မာစာတန်းထိုး ဗားရှင်း နဲ့ပြန်လည်ခံစား ရစေဖို့ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်…. မိသားစုတွေအတူတကွကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Credit Review Zawgyi ငယ္ငယ္က သမုိင္းစာအုပ္ထဲမွာ သင္ကတည္းက ထင္က်န္မွတ္မိခဲ့တဲ့ ဂရိတို႔ရဲ့ ဂႏၶဝင္ေျမာက္ “ထရိုင္” မဟာစစ္ပြဲႀကီး အေၾကာင္းရိုက္ထားတဲ့ ဇတ္ကား….. အခ်စ္ အၾကမ္း အရမ္း အလြမ္း ရသစံုလင္တဲ့ ဇတ္ကားေကာင္းေလးပါ…..ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားၾကည့္ဖူးၿပီးသားျဖစ္ေပမဲ့ ျမန္မာစာတန္းထိုး ဗားရွင္း နဲ႔ျပန္လည္ခံစား ရေစဖို႔ တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္…. မိသားစုေတြအတူတကြၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါတယ္။ Credit Review
IMDB: 7.2/10 445,040 votes
Ratatouille (2007) Unicode Animationဇာက်ကားကြိုက်တဲ့လူများအတွက် နာမည်ကျော် ကာတွန်းကားအများအပြားကို ထုပ်လုပ်တဲ့ Walt Disney က ရိုက်ကူးထားတဲ့ ratatouille ဆိုတဲ့ ကြွက်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေRemyက အိုင်ဒီယာကောင်းပြီး အနံ့ အရသာခံတဲ့နေရာမှာ ထူးချွန်တဲ့ ကြွက်တစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်သူ့က ချက်ပြုတ်တာကို အလွန်ဝါသနာပါသလို သူရဲ့ Heroကတော့ စားဖိုမှူး Auguste Gusteaပဲဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ ဟင်းချက်နည်းကို တီဗီကနေ အဘွားကြီးတစ်ယောက်ထဲနေတဲ့အိမ်မှာ အမြဲတမ်း သွား သွားကြည့်ပါတယ်တစ်ရက်မှာတော့ ဟင်းလျာတွေကို အကဲဖြတ်ရတဲ့ Egoက Auguste Gusteaရဲ့ ဟင်းလျာတွေကို Rating နည်းနည်းသာပေးတာကြောင့် Auguste Gustea ကိုယ့်ကိုကို သတ်သေသွားတဲ့ သတင်းကို တွေ့လိုက်ရပြီး ဝမ်နည်းစွာ အော်မိတာကြောင့် အဘွားကြီးက ကြွက်ရှိကြောင်း သိသွားပြီး သေနတ်နဲ့ လိုက်ပြစ်တာကြောင့် တစ်ဆွေလုံး တစ်မျိုးလုံးထွက်ပြေးရင်း Remyကတော့ သူ့အမျိုးတွေနဲ့ ကွဲသွားပြီး စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုကို ရောက်သွားရကနေ အစမ်းခန့်ထားတဲ့ ...
IMDB: 8.0/10 572,588 votes